IWyndham Long Wharf! Imizuzu nje ukusuka eThames St!
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguRick
URick unezimvo eziyi-775 zezinye iindawo.
URick ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-95% yeendwendwe zakutshanje.
Le ndawo intle yokuchithela iiholide ibonakalisa uyilo lwe-shingle yaseNew England iyenza ilunge ngokugqibeleleyo phakathi kobuninzi bezindlu zaseNewport zembali kunye nezindlu ezinkulu zenkulungwane ye-19. Izindlu zembali zeNewport Gilded Age zivulekele ukhenketho kwaye zibonelela ngombono okhethekileyo kumakhaya eentsapho zeentsapho ezibalaseleyo zelo xesha. Iindwendwe zikonwabela ukuhamba ngesikhephe, ukuloba, ukuhamba ngesikhephe eNarragansett Bay, i-croquet engceni, indawo yokupheka kwipavilion, okanye uhambe ngesitrato ukuya kwi-Wharf.
Le suite ebanzi enamagumbi amabini ekuchithelwa kuyo iholide ilinganisa malunga neemitha ezingama-925 zesikwere. Uyakonwabela ibhedi yokumkani kwigumbi lokulala elikhulu, iibhedi ezimbini ezingamawele kwigumbi lokulala leendwendwe kunye nesofa yokumkanikazi enye kwigumbi lokuhlala. Izinto ezongezelelekileyo zibandakanya ikhitshi eligcweleyo, indawo yokutyela, amagumbi amabini okuhlambela agcweleyo. Abona bantu bahlala kwisithandathu. Indawo yokulala yabucala ilala ezine.
Ikhona into yakhe wonke umntu kwiClub Wyndham Long Wharf. Buyela kwakhona kwidama lokuqubha elichumileyo elingaphakathi elinebhafu epholileyo eshushu, okanye ugcakamele ilanga ecaleni kwedama lokuqubha langaphandle. Ithiyetha yemiboniso bhanyabhanya yabucala engqonge isandi yindawo yokubambisa. Gcina inkqubo yakho yokuzilolonga kwiziko lokuzilolonga kwaye wonwabele ulonwabo losapho kwigumbi lomdlalo. Indawo yokuhlamba impahla kwiClub Wyndham Long Wharf inika iindwendwe ithuba lokupakisha ukukhanya kwaye ziphoswe yiloo mali yongeziweyo yempahla yesikhululo seenqwelomoya.
Ezantsi nje kwesitrato, yiba namava okuthenga elwandle, ukutya kunye nokuzonwabisa kwiSitrato iThames, okanye ubambe isikhephe sokuqasha ngaphandle kweNewport Harbour. Ukonwabele ukuthenga kwindawo yeMarike yeBrick, okanye ilifa leNew England kwiMyuziyam yeMbali yaseNewport. Ukhenketho lweGhost lukwakhona. Iindwendwe ngokuqinisekileyo ziya kuhamba ngokulula njengoko i-T.F. Isikhululo seenqwelomoya saseGreen sikufutshane ngemizuzu engama-40 ukuba uhambe.